Audio Book များဖြင့် ဘာသာစကား လေ့လာနိုင်မယ့် Beelinguapp – DigitalTimes
Audio Book များဖြင့် ဘာသာစကား လေ့လာနိုင်မယ့် Beelinguapp
Beelinguapp ဟာ Audio Books များဖြင့် ဘာသာစကားများကို လေ့လာနိုင်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ သင့်ရဲ့ မိခင် ဘာသာစကားနဲ့ သင်ယူလေ့လာချင်တဲ့ ဘာသာစကားများရဲ့ စာသားများကို အထက်၊ အောက် ယှဉ်၍ လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် သင်ယူလေ့လာချင်တဲ့ ဘာသာစကားများကို သူက အသံထွက် ဖတ်ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ Spanish, English, German, Portuguese, Korean, French, Hindi, Russian, Turkish, Chinese, Arabic, Italian နဲ့ Japanese ဘာသာစကားများကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သူက ဝတ္ထုများ၊ ပုံပြင်များကို အသံထွက် ဖတ်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားများကို ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ သင်ယူရ လွယ်ကူအောင်လည်း သူက ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ သူ့ကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် အချို့ Story များကိုတော့ ဝယ်ယူ လေ့လာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ Story များစွာလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ၊ ဝတ္ထု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကလေးစာပေ၊ ခရီးသွား စသဖြင့် စာအုပ်များကို ကဏ္ဍများ ခွဲခြား၍ ရှာဖွေနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Beginner , Intermediate, Advanced စသဖြင့်လည်း သင့်ရဲ့ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ သင့်တော်မယ့် စာအုပ်များကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သူ့ကို ပထမဆုံး အကြိမ်ဖွင့်ရင် သူ့ရဲ့ စွမ်းရည်များကို ပြသမှာပါ။ Next Button ကို နှိပ်ပြီး ဖတ်ပါ။ နောက်အဆင့်မှာ သင် သင်ယူလေ့လာမယ့် ဘာသာစကားကို ရွေးပေးပါ။ နောက်အဆင့်မှာ သင့်ရဲ့ မိခင်ဘာသာစကား သို့မဟုတ် Reference Language ကို ရွေးပေးပါ။ ပြီးရင် သင့်ရဲ့ Google or Facebook အကောင့်ဖြင့် Login ဝင်ပါ။
သူ့ရဲ့ Home Screen or Library မှာ စာအုပ်များကို ပြသထားပါတယ်။ အပေါ်ထိပ်မှ Language မှာ သင်နှစ်သက်တဲ့ ဘာသာစကားကို ထောက်ပံ့တဲ့ စာအုပ်များကို Filter များဖြင့် ရှာနိုင်ပါတယ်။
Level မှာ Beginner , Intermediate, Advanced တို့ထဲကနေ ရွေးနိုင်ပါတယ်။
Category မှာ ကဏ္ဍများဖြင့် စာအုပ်များကို ရှာနိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်တစ်အုပ်ကို နှိပ်ပါ။ “ Read my first …. “ ကို နှိပ်ပြီး စာအုပ်ကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။
စာရေးသူက သင်ယူချင်တဲ့ ဘာသာစကားကို ရုရှားကို ရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ ရုရှား ဘာသာစကားဟာ စာရေးသူရဲ့ ဖုန်းမှာတော့ အမှန်မပေါ်တာတွေ့ရပါတယ်။ တရုတ် ဘာသာစကားကတော့ မှန်ကန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မိခင်ဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်ကို ရွေးထားတဲ့အတွက် အောက်ဘက် အကန့်မှာ အင်္ဂလိပ်လို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
အောက်ခြေမှ Play Button ကို နှိပ်ရင် သင် သင်ယူမယ့် ဘာသာစကားဖြင့် စာအုပ်ကို အသံထွက်ဖတ်ပြပေးမှာပါ။ ဖတ်ပြတဲ့ ဝါကျများကို သူက Highlight ဖြင့် ပြပေးထားပါတယ်။ Pause လုပ်ပြီး သင် သိပ်နားမလည်တဲ့ ဝါကျကို တစ်ချက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်လည်း အဲဒါ ဝါကျကို ပြန်လည် လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်ထိပ်မှ A ခလုတ်ကို နှိပ်ရင် အသံထွက်ဖတ်ပြတဲ့ အမြန်နှုန်း၊ စာလုံး အရွယ်အစားများကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ညာဘက်မှ ခလုတ်ကို နှိပ်ရင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ဖျောက်ပေးပြီး ရုရှားဘာသာစကားကိုသာ ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ခြေမှ More ကို နှိပ်ပြီး Settings ထဲသွားရင် သင့်ရဲ့ Default Languages များကို ပြန်လည် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေမှ My Stories မှာ သင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်များကို ပြသပေးထားပါတယ်။ အချို့စာအုပ်များကို အခမဲ့ သုံးနိုင်ပေမယ့် အချို့စာအုပ်များဟာ အခပေး ဖြစ်ပါတယ်။ အခပေး စာအုပ်များကို Preview သာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ 8MB ရှိပြီး Android Version 4.1 နဲ့ သူ့အထက်မှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Oppo Find X ရဲ့ Display တွေ စွန်းမိုက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းက??
Huawei က ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ 5G Chips နဲ့ Phone ကို ရောင်းမည်